बुधबार बजारमा कतिले घट्यो सुनको मूल्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
बुधबार बजारमा कतिले घट्यो सुनको मूल्य ?
काठमाडौं, असार २५ । साताको चौथो दिन बुधबार बजारमा सुनको भाऊ दुई सय रुपैयाँले घटेको छ ।
मंगलबार प्रतितोला सुनको मूल्य ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर प्रतितोला सुनको मूल्य ६४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, मंगलबार तेजावी सुनको मूल्य ६४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज घटेर प्रतितोला सुनको मूल्य ६४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, बुधबार बजारमा चाँदीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
मंगलबार चाँदी प्रतितोला ७ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो भने आजपनि चाँदी प्रतितोला ७ सय २० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।